चीनले प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने सूचना पाएपछि देउवाले चिनियाँ राजदूतलाई के भने ? – ZoomNP
चीनले प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने सूचना पाएपछि देउवाले चिनियाँ राजदूतलाई के भने ? प्रकाशित मिति: बिहिवार, मंसिर ०२, २०७३ समय - ९:५०:१९ काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू र आफ्नो दल चीनविरोधी नरहेको बताएका छन् ।
नेपालका लागि चिनियाँ नवनियुक्त राजदूत यु होङ्गसँग बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार भएको भेटमा देउवाले आफूबारे लगाइएको आरोप गलत रहेको प्रष्टीकरण दिए ।
दुई साताअघि भारत गएका देउवाले इण्डिया फाउण्डेशनको कार्यक्रममा तिब्बतका निर्वासित नेता दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग भेटेको खबर बाहिर आएपछि चीनले त्यसबारे चासो राखेको थियो ।
आफूसँग चीन चिढिएको बुझेका देउवाले राजदूतसँग आफू एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र भारतमा दलाइका प्रतिनिधि नभेटेको बताएका हुन् ।
‘नेपाली काँग्रेस र व्यक्तिगत रुपमा म एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौं’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट श्रोतले भन्यो, ‘मैले भारतमा दलाइका मान्छे भेटेको सत्य होइन ।’
एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध नरहेको र सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका देउवा निकट काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भारत खुसी पार्न चीनविरोधी गतिविधि गरेकाले देउवालाई चीनले प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने चर्चा भइरहेका बेला देउवाले चिनियाँ राजदूतलाई प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।